Warta-nabadda oo u gudubtay Final-ka tartan cilmiyeedka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Warta-nabadda oo u gudubtay Final-ka tartan cilmiyeedka
Warta-nabadda oo u gudubtay Final-ka tartan cilmiyeedka
Habeenka 25-aad tartan cilmiyeedka Warbaahinta Qaranka ee uu maamulka gobolka Benaadir taabagelinayo, waxaa ku tartamay Kooxdii u horreysay ee Final-ka aadi lahayd degmooyinka Kaaraan iyo Warta-nabadda oo ka wada tirsan gobolka Benaadir.
Tartanka oo aad u adkaa, qeybta hore waxaa lagu weydiiyey degmada walba afar su’aal, iyadoo sidoo kale lagu soo gudbiyey qeybta nasashada Majaajillooyin daawadayaasha iyo dhaheysteyaasha loogu talogashay.
Degmada Kaaraan ee gobolka Benaadir oo horey ugu soo guuleystay tartankaan sannadkii 2014-kii, ayaa caawa kama dambeysta wareegga afar dhammaadka la tartantay degmada Warta-nabadda, Kaaraan waxaa la weydiiyey toddoba su’aal, waxa ay si sax ah uga jawaabbeen hal su’aal, Lix waa ay qaldeen, wax ka faa’ideysi ahna ma helin, Kaaraan waxa ay heleen laba dhibcood oo Kaliyah.
degmada Warta-nabadda ee gobolka Benaadir, iyaguna horey ayeey hal mar ugu soo guuleysteen tartankaan, waxaa la weydiiyey toddoba su’aal, waxa ay si sax ah uga jawaabbeen laba su’aal, shan waa ay qaldeen, si ka faa’ideysi ah ayeey su’aal Kaaraan soo hareermartay uga jawaabbeen waxa ay uruursadeen Lix dhibcood, Warta-nabadda ayaa u gudubtay Final-ka tartan Cilmiyeedka Warbaahinta Qaran ee Ramadaan, waxa uu tartanka ku dhammaadey (6 Warta-nabadda Kaaraan 2 ).
Habeen Dambe degmadii la tartami lahayd Final-ka Warta-nabadda ayaa la sugayaa oo waxaa tartami doona degmooyinka Dhahar oo ka tirsan gobolka Sanaag iyo Shibis oo gobolka Benaadir ka tirsan.
Degmada Kaaraan waxa ay Kaalinta Saddexaad kula tartami doontaa degmadii habeen dambe looga adkaayo tartanka, Insha Allaah.
Previous articleRW Khayre oo si kulul u cambaareeyey falkii argagaxisada ee degmada Wadajir
Next articleDowladda Soomaaliya Oo Dad Qaba Dhaawacyo Halis ah U qaaday Boqortooyada Sacuudiga